नयाँ घर पाएपछि पहिरोपीडित खुशी
दैलेख । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका पहिरोपीडित परिवारहरूले नयाँ घर पाएका छन् । १ वर्षअघि पहिरोका कारण विस्थापित गुराँस–२ पुडेनीका स्थानीयले नयाँ घर पाएका हुन् ।
२०७६ असारमा पहिरो आउँदा पूरा गाउँनै जोखिममा परेपछि पुडेनीका १४ ओटा घरका ९२ जना सदस्यहरू विस्थापित भएका थिए । ठिक १ वर्षपछि आपूmहरूले भूकम्पप्रतिरोधी घर पाउँदा निकै खुशी भएको स्थानीय जयबहादुर ओलीले बताए ।
१ वर्षदेखि विस्थापित परिवारहरू स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको पालमुनी बसेका थिए । उनीहरूलाई उज्यालोका लागि सोलार उपलब्ध गराइएको थियो । प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सोही वडाकै डुडापोखरीमा घरहरू निर्माण गरेको गाउँपालिकाले बताएको छ । २ कोठे घरहरू निर्माणका लागि गाउँपालिकाको रू. ३५ लाख र प्रदेश सरकारको विशेष अनुदान अन्तर्गतको रू. २५ लाखसहित रू. ६० लाख लगानी भएको छ भने स्थानीयको रू. ८ लाख रकम खर्च भएको बताइएको छ ।
नयाँ घरमा पानी, बत्ती र शौचालयको प्रबन्ध गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताए । ‘हामीले अझै छिटो घर निर्माण सम्पन्न गरी सक्ने थियौं’, उनले भने, ‘विस्थापित परिवारहरूको घर, जग्गा आसपासमा बनाउन खोजिएको र त्यसका लागि सार्वजनिक जग्गा खोज्न ढिलाई भएको हो ।’